ကမ္ဘာပေါ်မှာမုန်တိုင်းထန်တဲ့နေရာတွေကဘာတွေလဲ။ | ကွန်ယက်မိုးလေဝသ
မုန်တိုင်းဖြစ်စဉ်များသည်လျှပ်စီးလက်ခြင်းနှင့်မိုးကြိုးသံကိုကြားလိုသောသူများနှင့်၎င်းတို့ဖြစ်ပေါ်လာသော Cumulonimbus တိမ်များကဲ့သို့ဖြစ်ပျက်သမျှအားလုံး၏အထင်ရှားဆုံးသောသူများအတွက်ဖြစ်သည်။
ကံမကောင်းစွာပဲလူတိုင်းကြိုက်နှစ်သက်သလိုမျိုးဘယ်တော့မှမမိုးရွာသည့်နည်းတူထိုအဖြစ်အပျက်များကိုပိုမိုနှစ်သက်သူများရှိကြသည်။ သူတို့ကနေထိုင်ကြသည် ကမ္ဘာပေါ်ရှိမုန်တိုင်းထန်သောနေရာများ.
1 Catatumbo လျှပ်စီး (Maracaibo ရေကန်, ဗင်နီဇွဲလား)
2 ဘိုဂို (ဂျာဗားကျွန်း၊ အင်ဒိုနီးရှား)
3 ကွန်ဂိုမြစ်ဝှမ်း (အာဖရိက)
4 Lakeland (ဖလော်ရီဒါ)
Catatumbo လျှပ်စီး (Maracaibo ရေကန်, ဗင်နီဇွဲလား)
ဗင်နီဇွဲလားအနောက်မြောက်ဘက်တွင်တည်ရှိသောဤမြို့တွင် Catatumbo မြစ်နှင့် Maracaibo ရေကန်အကြားရှိ Catatumbo လျှပ်စီးအဖြစ်လူသိများသည့်ထူးခြားသည့်ဖြစ်ရပ်တစ်ခု။ ၎င်းသည် ၁ ကီလိုမီတာမှ ၄ ကီလိုမီတာအကြားရှိကြီးမားသောဒေါင်လိုက်ဖွံ့ဖြိုးမှု၏တိမ်တိုက်များတွင်ဖြစ်ပေါ်သည်။
သင်ဤပြပွဲပျော်မွေ့နိုင်ပါတယ် တစ်နှစ် 260 ကြိမ်တစ်ညတည်း၌ပင် 10am အထိဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်တစ်မိနစ်လျှင် downloads ခြောက်ဆယ်အထိရောက်နိုင်သည်။
ဘိုဂို (ဂျာဗားကျွန်း၊ အင်ဒိုနီးရှား)
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၊ ဂျာဗားကျွန်းရှိမီးတောင်ကြီးအနီးတွင်တည်ရှိသောမြို့ဖြစ်သည်။ ဒီနေရာမှာဖြစ်နိုင်သည် နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းမုန်တိုင်း ၃၂၂ ရက်ရှိသည်။ အများစုမှာမီးတောင်တွင်ဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့သည်မုန်တိုင်းထန်သောနေရာတစ်ခုကိုရှာဖွေနေပါက၎င်းသည်ဘိုဂိုဖြစ်သည်။ နေ့တိုင်းနီးပါးမုန်တိုင်းများရှိသည်!
ကမ္ဘာ၏ဤအပိုင်းတွင်အထူးသဖြင့် Bunia (ကွန်ဂိုသမ္မတနိုင်ငံ) တွင်နေထိုင်သူများသည်မြင်နိုင်သည် တစ်နှစ်လျှင်မုန်တိုင်း ၂၂၈ ခု။ ၎င်းသည်ဘိုဂိုကဲ့သို့မဟုတ်သော်လည်းစပိန်နိုင်ငံတွင်ကျွန်ုပ်တို့မြင်တွေ့ရသောအရာထက်များစွာပိုသည်။ ၁၀ ရက်မှ ၄၀ အကြား၊ ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်သည့်onရိယာပေါ်မူတည်သည်။
ဖလော်ရီဒါ (ယူနိုက်တက်စတိတ်) တွင်တည်ရှိသော Lakeland မြို့တွင်အလွန်လှပသောရှုခင်းများရှိခြင်းအပြင်သူတို့၏ဂုဏ်ယူဖွယ်ရာများလည်းရှိသည်။ ရက်ပေါင်း 130 toementa နှစ်.
ဒါကြောင့်အခုသင်သိပြီ၊ အကယ်၍ သင်ဟာတစ်နေရာရာမှာအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်နေရာအနည်းငယ်ကိုဖြုန်းဖို့စဉ်းစားနေတယ်ဆိုရင်ငါပြောခဲ့တဲ့နေရာတစ်ခုခုဆီကိုသွားလည်ပါ။ မင်းဟာတကယ်ကောင်းတဲ့အချိန်ရှိလိမ့်မယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကွန်ယက်မိုးလေဝသ » ကွန်ယက်မိုးလေဝသ » ရုပ်ပုံများ » ကမ္ဘာပေါ်မှာမုန်တိုင်းထန်တဲ့နေရာတွေကဘာတွေလဲ။